Taratasim-baovao RV: Nahazo ny loka Linguapax iraisampirenena i Idara Baraye Taleem-o-Taraqi · Global Voices teny Malagasy
Taratasim-baovao RV: Nahazo ny loka Linguapax iraisampirenena i Idara Baraye Taleem-o-Taraqi
Voadika ny 10 Novambra 2021 14:19 GMT
Sary nomen'i Zubair Torwali, mpanorina ny Idara Baraye Taleem-o-Taraqi; nahazoan'ny Rising Voices alalana.
Fanamarihan'ny Rising Voices: Ny taratasim-baovao mivoaka isam-bolana dia manome ny fehin'ny ranty blaogy momba ny endrika rehetra amin'ny fampiatiana ankihy ka ao anatin'izany ny fidirana sy ny fandraisana hampiasa ny fitaovana ankihy, sy ireo fomba sy hirika isankarazany ho an'ny vondrom-piarahamonina handray anjara feno anjotra. Vakio ato ireo famoahana teo aloha amin'ity taratasim-baovao ity.
Salama ry mpamaky, manakory ianareo izay?
Tianay ny manokatra azy ity amin'ny vaovao mampangitakitaka: Amin'ity taona ity, nanapa-kevitra ny Linguapax hanolotra ny lokany iraisampirenena ho an'i Idara Baraye Taleem-o-Taraqi (aka IBT), fikambanana iray naorin'i Zubair Torwali namanay!
Tamin'ny volana mey tamin'ny herintaona, nahazo voninahitra izahay nahazo an'Atoa Torwali ho vahiny nampiantrano ny fanentanana @AsiaLangsOnline nandritra ny herinandro. Tena zendana tokoa izahay tamin'ny fanoloran-tenany ho amin'ny fikolokoloana ny fitenin'ny vitsy an'isa ao an-toerana sy ny fanomezam-bahana ireo vondrom-piarahamonina isa-toerana ao Pakistan avaratra.
Raha tianao ny mahafantatra izay vitan'i IBT nahatonga azy hahazo ity loka ity, dia azonao vakiana ny piesy fanambaràna nataon'i Linguapax. Raha tianay ny hahafantatra bebe kokoa momba an'Atoa Torwali sy ny asany araka ny teniny mihitsy dia vakio ny fanontaniana sy valiny nifanaovanay tamin'Atoa Torwali [mg] tamin'ny taona 2020.
BEBE KOKOA AVY AMIN'NY BLAOGY RISING VOICES
Manaraka ity zotra ity, tianay ny hitondra anao ho any Malayzia hijery lanonana an-tranonkala nomanin'ny mpianatra, mikendry ny hampiroborobo ny fiteny indizany ao an-toerana, ary hijery izay azontsika tsoahina avy amin-dry zareo. → “Mpianatra Malayziana mifampizara lesona mampiasa fitaovana ankihy hampiroboroboana fiteny indizeny [mg]”
HIRIKA | VATSIM-PIANARANA & FINAMANANA
Te-hisondrotra haingana amin'ny asanao ve ianao? Isan-taona ny Nieman Foundation mifantina mpanao gazety hatramin'ny 24 avy amin'ny media manerana izao tontolo izao sy hanohana taona iray ianarana ao amin'ny Harvard. Tsy vitan'ny hoe hanabe voho ny fahaizany arakasa ihany ireo sakaiza ireo fa hanangana fifandraisana vaovao ihany koa. Jereo ato ny antsipirian'izany. Fotoam-pisoratana anarana: 1 Desambra 2021/31 Janoary 2022
Efa nampiasa hatra (apps) mampiasa famantaram-peo na teknolojiam-peo tahaka izany ve ianao? Efa mba nihevitra ve hoe ahoana ny fianaran'ny milina hampisy dikany izay lazaintsika? Manana ny vintana ianao izany hanampy ny tobin-dahatahiry feo open-source miaraka amin'ny Mozilla Common Voice sy hanampy mba hanaisotra ny fitongilanan'ny Faharanitsan-tsaina Voatr'Olombelona amin'ny feo. Vakio ato raha tianao ny handray anjara koa amin'izany fisantaran'andraikitra izany!
HETSIKA SY KAOFERANSA HO AVY
Ho aiza ny toekarentsika aorian'ny valan'aretina? Afa-mifampitantana ve ny fampiatiana, ny fahazakàna maharitra ary ny fampandrosoana? Raha ny amin'ny media: Ahoana ny hahitantsika ny fifandanjaana eo amin'ny fahazakàna maharitra sy ny fanaleovantenany, raha mihazona ny fahasamihafàny? Raha manontany toy izany ihany koa ianao, dia mihevitra izahay fa mety tsy handray anjara amin'ny Trust Conference 2021 ianao. Daty: 17–18 Novambra 2021
HAFA HOVAKIANA, HOJERENA sy HOHENOINA (amin'ny fiteny anglisy)
The race to document endangered languages, now that we have the technology via Gizmodo
How indigenous creators are nurturing a space on TikTok to educate and entertain via PBS NewsHour
Publishing for WhatsApp? Here are three great ways to do it via jamlab (the Journalism and Media Lab)
Can ‘freemium’ internet hotspots really bring Guatemala online? via Rest of World
A weekend at tribal wireless bootcamp via American Indian Policy Institute
Isaorana i Eddie Avila sy i Ameya Nagarajan nandray anjara tamin'ity taratasim-baovao ity.